Maamulka Jubbaland oo dowlada federalka ku eedeeyay dagaal ka dhacay maanta Kismaayo - Jowhar Somali news Leader
Home News Maamulka Jubbaland oo dowlada federalka ku eedeeyay dagaal ka dhacay maanta Kismaayo
Maamulka Jubbaland oo dowlada federalka ku eedeeyay dagaal ka dhacay maanta Kismaayo
Wasiirka Warfaafinta Dowlad-goboleedka Jubbaland Cabdi Xuseen Sheekh oo gelinkii dambe ee maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Kismaayo ayaa sheegay in ciidanka amniga Jubbaland ay fashiliyeen isku day ay Dowladda Federaalku ku khal khal gelinayso nabadgelyada magaalada Kismaayo.
Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed Wasiirka warfaafinta Dowlad-goboleedka Jubbaland ayaa shirkiisa jaraa’id ku sheegay in fashiliyeen qorshe ay dowlada federalka Soomaaliya ku dooneysay inay ku wiiqaan ammaanka Kismaayo.
“Ciidanka amniga Jubbaland waxa ay dhabarka ka jebiyeen qorshe ay Dowladda Federaalku ugu talo gashay in ay ku bur-buriso nabadgelyada magaalada Kismaayo, iyada oo adeegsanaysa kooxo malayshiyaad ah balse wuu dhicisoobay.”ayuu yiri wasiirka warfaafinta Jubbaland.
Waxaa uu sheegay wasiirku in Ciidanka Jubbaland ay Caddaaladda horkeeni doonaan Kooxdii maanta rabashadaha ka sameysay Kismaayo.
Iskahorimaad hubeysan oo maanta ka dhacay maanta magaalada Kismaayo ayaa sababay qasaare isugu jirta dhimasho iyo dhaawac.
Waxana uu iskahorimaadkan ku soo beegmay xilli ay maanta gaareen magaalada Kismaayo taliyaha howlgalka AFRICOM Stephen Townsen iyo safiirka Maraykanka u fadhiya Soomaaliya Donal Yamamota.